सधैँ काँग्रेस भएर एक दिन अर्को नहुन केन्द्रीय प्रतिनिधि पाण्डेको आग्रह
By vijayafm on	 September 10, 2019 देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
नवलपुर । नेपाली काँग्रेसको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान नवलपुरमा मंगलबारबाट सुरु भएको छ । गैँडाकोट ७ मा रहेको नारायणी माध्यामिक विद्यालयको परिसरमा वृक्षारोपण गर्दै जागरण अभियान सुरु गरिएको हो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधि शंकर पाण्डेको उपस्थितिमा १०६ वटा विरुवा बृक्षारोपण गरिएको हो । विपी कोइरालाको १०६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा गरिएको जागरण अभियानका क्रममा बोल्दै केन्द्रीय प्रतिनिधि शंकर पाण्डेले नेपाली काँग्रेसलाई अघि बढाउन र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि युवाहरुको काँधमा भूमिका आएको बताउनुभयो । प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि विपी कोइरालाको जन्म भएको भन्दै विपिको योगदानमा आएको प्रजातन्त्रलाई जोगाइ राख्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । चार वर्ष नेपाली काँग्रेस र एक दिन अरु हुने परिपाटीले काँग्रेसलाई चोट लाग्दै गएको हुनाले सुध्रन केन्द्रीय प्रतिनिधि पाण्डेले आग्रह समेत गर्नुभयो । दोस्रो चरणको अभियानमा पार्टी सुदृढीकरण, समसामयिक राजनीति, जनजीविकाका सवाल, सुशासनलगायत विभिन्न १५ उद्देश्य निर्धारण गरिएको पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका अर्का प्रतिनिधि रघुनाथ पौडेल पौडेलले नेविसंघ र तरुण दललाई क्रियाशिल बनाएर मात्र नेपाली काँग्रेसको जागरण हुने बताउनुभयो । कम्युनिष्टहरुले कम्युनिजम विर्सेको यही सन्दर्भमा हामीले आफूहरुलाई सुधार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुभएका संघिय क्षेत्र नं. १ का सभापति द्रोण वनले स्वागत गर्नुभएको थियो भने प्रदेश समितिका सचिव विष्णु कंडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कंडेलका अनुसार प्रदेश समितिले जागरण अभियानका लागि कार्यक्रम तालिका बनाइसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेश समितिले भाद्र २५ र २६ गते द्वन्द्वपीडितका घरमा भेटघाट गर्ने, २७ गते डाँडाझेरीमा छलफल, २८ गते कोटथर, २९ गते ढोडेनी, ३० गते दमार, ३१ ग्ते भोक्रोफाँटमा भेटघाट तथा छलफलको कार्यक्रम बनाएको सचिव कंडेलले बताउनुभयो । यसैगरी प्रदेश समितिले असोज १ गते मुकुन्दपुरमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफलको कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला र नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा नवलपुर १ (क) का सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीको आतिथ्य रहने जनाइएको छ ।
यसैगरी असोज २ गते मुकुन्दपुरमा भातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरुसँगको भेटघाट, असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन रजहर चोक, अमरापुरी चोक, हर्कपुर, काँग्रेस चोक, डाँडाझेरी र कोटथरमा दीपावली प्रज्वलनको कार्यक्रम रहेको प्रदेश समिति सचिव कंडेलले बताउनुभयो । असोज ४ गते बिपी स्मृति भवन गैँडाकोटमा युवा तथा नेविसंघका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल रहेको छ । असोज ५ गते रजहरमा केन्द्रीय प्रतिनिधि र स्थानीयहरुबीच छलफलको कार्यतालिका रहेको छ । असोज ६ गते आमसभा प्रचारप्रसारको तयारी एवं असोज ७ गते कावासोतीमा बृहत् आमसभाको कार्यक्रम रहेको सचिव कंडेलले जानकारी दिनुभयो ।